Faahfaahinta Wareegtada Nidaamka Caadiga ah ee Koontaroolada ee Hoteel | RayHaber | raillynews
HomeGUUDFaahfaahinta Wareegtada Nidaamka Caadiga ah ee Koontaroolka Hoteellada
13 / 05 / 2020 GUUD, coronavirus, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Faahfaahinta wareegtada habeynta hanaanka loo xakameeyay ee hoteelada
Faahfaahinta wareegtada cinwaankeedu yahay "Geeddi socodka Nidaamka Caadiga ah ee Koontaroolka Goobaha Degaanka" oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa la shaaciyey.
Sida la ogsoon yahay, baaxadda tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurka 'Coronary Virus' (COVID-19), oo lagu soo daray baaxadda 'Faafida' oo ay soo saareen Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa la bilaabay hanaanka kontoroolka caadiga ah.
Kaddib dagaalka guuleysta ee lagula dagaallamayo cudurka faafa, waxaa la saadaalinayaa in howlaha safarka iyo dalxiiska dib loo bilaabi doono hanaan caafimaad qaba.
Xaaladda guud, si loogu gudbiyo howlaha dalxiiska si amaan ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tillaabooyinka soo socda lana hubiyo sii wadashadooda xarumaha deynta ee wali firfircoon ama bilaabaya inay howlahooda galaan.
Borotokool daboolaya COVID-19 iyo xeerarka nadaafadda / dhaqangelinta ayaa loo diyaariyay shirkaddan oo dhan, borotokoolka ayaa si joogto ah loo qiimeeyaa, waa la cusboonaysiiyaa iyada oo la tixgelinayo dhibaatooyinka la soo maray ficil ahaan, xalalka la keenay iyo tillaabooyinka ay qaadaan hay'adaha dowliga ah ama ururrada. Hab maamuuska, muujinaya calaamadaha cudurka
Ujeeddada shaqaalaha loo fidiyo macaamiisha iyo talaabooyinka la qaadayo ayaa sidoo kale la qeexay. Intaa waxa u dheer, qorshe masaafada bulsheed ayaa loo diyaariyey aagagga guud ee isticmaalka.
Macluumaadka qoran ee ku saabsan taxaddarrada iyo taxadarka COVID-19 waxaa lagu bixiyaa aqbalaadda martida, iyo macluumaadka muuqaalka ah ee ku saabsan qawaaniinta iyo masaafada bulsheed ee lagu dabaqi karo / loo hoggaansamo meelaha ay martida iyo shaqaaluhu si fudud ugu arki karaan xarunta. Calaamadaha masaafada bulshada ayaa la sameeyaa meel kastoo safku ka dhici karo.
Haddii ay dhacdo go'aaminta qofka martida ah ama shaqaalaha laga shakisan yahay cudurka, maamulka ayaa la ogeysiinayaa, bukaanka waxaa go'doominaaya xarunta caafimaadka ilaa kala wareejinta, adeegyada waxaa bixiya shaqaalaha qaaday taxadarka amniga. Waa la bixiyay.
Dhismooyinka dejinta waxay martigaliyayaashu ku qaabilaan si go'an, iyadoo la ilaalinayo xeerarka masaafada bulshada.
Martida waxaa lagu soo dhaweynayaa kaameeraha kuleylka ama codsiyada cabbiraadda qandhada ee aan lala xiriirin, kaarbiyada iyo jeermis-ka-hortagga gacmaha iyo jeermis-ka-hortagga gacanta albaabka xarunta. Qalab ilaalin shaqsiyadeed sida waji gashiga iyo galoofyada ayaa la siiyaa martida markii la codsado.
Martida waxaa laga codsanayaa in lagu wargaliyo bal in meelaha ay ku sugan yihiin, xaaladaha dabadheer, haddii ay jiraan, ay leeyihiin COVID-14. Intii suurta gal ah, lacag bixinta aan lagaraneyn ayaa lagu dalacayaa.
XAALADAHA GUUD EE GUUD
Astaamo sare oo dhulka lagu dhex qaado iyo macluumaad qoraal ah oo la xiriira isticmaalka wiishashka iyadoo la raacayo qawaaniinta masaafada bulshada ayaa la bixiyaa.
Qolka cuntada / qolka kulanka, qolka fadhiga rooti, ​​hoolka fadhiga, hoolka shirarka, hoolka shirarka, goobta soo dhawaynta, qolka fadhiga, hoolka ciyaarta, qolka ciyaarta, madadaalada, meelaha madadaalada, baararka, qolka iibka, qeybaha iibka, fadhiga / sugitaanka / banaanka banaanka diyaarinta cuntada iyo cabitaanka iyo dhammaan aagagga guud ee loo isticmaalo, oo ay ku jiraan hareeraha barkadda iyo hooska / kooxaha ku teedsan xeebta waxaa loo habeeyay si waafaqsan qorshaha masaafada bulshada, tallaabooyin lagama maarmaana ayaa laga qaadayaa masaafada bulsheed, calaamadaha ayaa la sameeyaa iyo martida looma aqbalo wax ka badan awoodda sida qorshuhu yahay.
Xaaladda masaafada bulsheed looma baahna martida fadhida isla qolka ama kuwa isku qoys ka ah, isticmaalka meelaha guud.
Unugyada sida qolalka ciyaarta, naadiga carruurta, baashaalka madadaalada, goobta ciyaarta ee loogu talagalay carruurta looma furin adeeg.
Waxyaabaha jeermiska dila ama gacanta ka ilaaliya waxaa lagu keydiyaa irridda aagagga guud ahaan loo isticmaalo iyo musqulaha guud ee macaamiisha, iyo sidoo kale meelaha kala duwan ee aaggaga guud ee isticmaalka. Hadday suurogal tahay, albaabada laga soo galo musqulaha dadweynaha waxaa loo habeeyey nidaam albaab oo otomaatig ah.
Haddii unugyada sida jimicsiga iyo jimicsiga la galiyo adeeg, nidaam boos celis ayaa lagu dabaqaa si loo hubiyo isticmaalkiisa nabdoon, tirada iyo muddada ay dadku u isticmaalayaan isla mar ahaantaana waa xaddidan yihiin, adeegsiga kasta ka dib, agabyada nadaafadda iyo aagagga loo adeegsado waxaa lasiiyaa alaabo nadaafadeed. Meelahan, alaabada sida saabuunta, shaambada, gel-ka qubeyska waxaa la siiyaa martida si loo isticmaalo.
Qeybaha SPA sida qubeyska Turkiga, saunas, unugyada duugista looma adeegsan doono xarumaha aan laheyn Shahaadada Dalxiiska Caafimaadka leh.
Shukumaanada barkadda-dabaasha waxaa la siiyaa martida si loogu isticmaalo baco xiran ama shaqaalaha.
Masaafada u dhaxaysa miisaska lagu bixiyo adeegga cuntada waa 1,5 mitir iyo 60 cm inta u dhaxaysa kuraasta ku xiga midba midka kale. Shaqaalaha adeegga ayaa ka taxadaraya inay ilaashadaan qawaaniinta masaafada isla markaana ay ka fogaadaan la xiriirka inta lagu jiro adeegga.
Haddii ay dhacdo arji furan, furfuran ama wax la mid ah waxaa loo sameeyaa hab ka horjoogsanaya martida inay soo galaan martida dhinaceeda buffet-ka, adeeggaana waxaa bixiya shaqaalaha jikada.
Gawaarida sida shaaha / mashiinka qaxwaha, qalabka biyaha lagu shubayo, mashiinka cabitaanka ee aagagga guud ee isticmaalka ayaa laga saaraa ama martida waxaa lagu siiyaa adeegga shaqaalaha. Nadiifinta nadaafadda waxaa lagu sameeyaa badeecado aalkolo ku saleysan ka dib isticmaal kasta oo marti ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha miisaska sida miisaska cuntada, kuraasta, alaabada adeegga, sokorta, cusbada, dhir udgoon, xafaayadaha, menus.
Haddii ay suurtagal tahay, sonkorta la tuuray, cusbada, xawaashyada, xafaayadaha ayaa la isticmaalaa.
Baaritaan caafimaad oo joogto ah ee shaqaalaha ayaa la sameeyaa, xog xilliyeed ayaa laga helayaa shaqaalaha si dadka ay la nool yihiin loola socon karo marka loo eego COVID-19.
Tababar gaar ah ayaa la siiyaa dhammaan shaqaalaha ku saabsan cudurada faafa iyo nadaafadda.
Waxa ku yaal kamarado kuleyl ama arjiyada cabbiraadda qandhada ee aan lala xiriirin, sariiraha jeermiska ka hortaga iyo jeermis-ka-jeermiska gacanta ama jeermiga ka hortagga.
Shaqaalaha waxaa la siiyaa qalab ilaalin shaqsiyadeed (sida waji-xidhka, waji-darka qalliinka, galoofyada, fiisooyinka) ku habboon la kulanka martida iyo deegaanka, isticmaalkiisana waa la kormeerayaa oo waa la kormeeraa,
Nadiifinta maalinlaha ah iyo nadaafadda dharka shaqaalaha ayaa la bixiyaa.
Daryeel ayaa loo qaataa si loogu shaqaaleeyo isla shaqaalaha sida ugu badan ee suurogalka ah isla isku beddelka.
Musqusha musqusha-musqusha iyo meelaha cunnada caadiga ah iyo nasashada ee shaqaalaha waxaa loo habeeyay iyadoo la raacayo duruufaha masaafada bulshada, qaban-qaabada sida astaamaha dhulka, haadka iyo caqabadaha ayaa la sameeyaa, haddii loo baahdo, nadiifinta iyo jeermiska meelahaas ayaa si joogto ah loo bixiyaa.
Haddii ay jiraan shaqaale guri ku leh goobta ama meel gaar ah, ugu badnaan 4
Guryeyn ayaa lagu bixiyaa qolal, hoy kuma laha hoolka waardiyaha, nadaafadda, nadaafadda iyo cabiraadaha caafimaadka ee hoyga iyo qaybaha cuntada iyo cabitaanka ayaa la bixiyaa iyadoo la raacayo shuruudaha quseeya unugyada martida, iyo helitaanka shaqaalaha aan la oggoleyn. Shuruucda lagu haayo xiriirada dadka si kumeelgaar ah xarunta loogu ogolaado bixinta alaabada ama sababao kale (dayactir, dayactir, iwm.) In ugu yar ayaa la go'aamiyaa lana hirgaliyaa. Intaas waxaa sii dheer, dadkaan waxaa lagu hubiyaa inay qabtaan howlahooda iyagoo ilaalinaya qawaaniinta masaafada bulshada iyo iyagoo isticmaalaya qalab ilaalin ah.
Xaaladaha ogaanshaha calaamadaha cudurka ee shaqaalaha, waxaa la hubiyaa inay codsadaan rugta caafimaadka ee kuugu dhow.
Nadiifinta guud iyo daryeelka
Meelaha oo dhan waxaa lagu nadiifiyaa agab jeermis-dilis ah iyadoo la raacayo heerarka iyo iyadoo loo eegayo tayada dusha sare, iyo iyadoo la adeegsanayo soo noqnoqoshada habboon, diiwaannada raad-raac ee barnaamijyadan ayaa la hayaa.
Dabaqyada musqulaha, musqulaha, kaadida, saxarada, tubooyinka iyo tubooyinka armaajooyinka, gacanta albaabku had iyo jeer waa la nadiifiyaa, waa la jeermis-diraa oo diiwaannada raadraaca ayaa la keydiyaa. Saabuunta dareeraha ah si joogto ah ayaa loo hayaa.
Dayactir joogto ah oo hawo-mareenka iyo nidaamka qaboojinta iyo aaladaha kale, qalabka, qalabka, qalabka sida dharka lagu dhaqdo iyo makiinada dharka lagu dhaqo iyo jeermiska looga baahan yahay kuwa lagama maarmaanka ah ayaa la bixiyaa.
Qalabka dusha sare ee gacmaha sida gacanta albaabka, gacan-qabashada, badhanka wiishka, batoonada korantada, qalabka boostada, kontoroolka telefishanka, taleefanka, kaarka tuwaalka, kaarka qolka ama furaha, kuleyliyeyaasha biyaha ee qolalka waxaa badanaa lagu nadiifiyaa jeermis-dileyaal waxaana lagu hayaa diiwaannada raad-raaca.
Qolalka macaamiisha, sagxadaha gacanta lagu taabto ee qolalka iyo qalabka sida taleefanka, kantaroolka fog, kuleyliyaha biyaha, gacanta albaabada daaqada waxaa lagu nadiifiyaa alaabada jeermiska markay joogitaanka martida dhamaato. Qolalka dhexdooda, alaabada la tuuri karo iyo foomamka macluumaadka ayaa la bixiyaa intii suurogal ah.
Nadiifinta hoyga martida waxaa sameeya shaqaalaha xirtaan maaskaro, iyagoo u isticmaalaya galoofyo la iska tuuro qolka macaamiisha kasta. Jumladaha, gogosha sariirta, barkimooyinka iyo gogosha macaamiisha ama qolka shaqaalaha ee lagu soo helo Covid-19 ayaa si gaar ah loogu ururiyaa oo gooni gooni loo maydhaa.
Hawo dabiici ah ee aagagga xiran ayaa badiyaa la bixiyaa. Miirayaasha hawo qaboojiyeyaasha / nidaamyada hawo-qaadashada ayaa had iyo jeer la beddelaa.
Weelasha qashinka midabada leh waxaa lagu ridayaa shaqaalaha iyo goobaha dadweynaha ee macaamiisha, waxaa la sheegayaa in sanduuqyadan loogu talagalay keliya agabyada ay ka midka yihiin maaskaro iyo galoofyada, qashinkaan kuma jiraan kuwa qashinka kale inta lagu jiro.
Nadiifinta iyo nadaafadda jikada iyo meelaha la xiriira, dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka iyo qalabka loo isticmaalo jikada, miiska iyo meelaha keydka ayaa si joogto ah loo bixiyaa.
Soo-saarista alaabada ceyriinka iyo alaabada soosaarka cuntada iyo aagga jikada, caqabadaha daruuriga ah ee nadaafadda, aaladaha jeermis-dileyaasha, aaladaha iyo qalabka loogu talagalay nadaafadda gacmaha iyo jirka ayaa la ilaaliyaa. Shaqaaluhu ma geli karo meelaha jikada.
Cunnooyinka oo dhan waxaa lagu keydiyaa khaanado xiran ama dabool. Si looga hortago is-kala-qaadidda iskutallaabta, cuntooyinka ay ku diyaarsan yihiin cuntooyinka aan la-daweynin waxaa lagu kaydiyaa si gooni gooni ah jikada.
Shaqaalaha jikada waxay isticmaalaan dharka shaqada iyo qalabka kahortaga shaqsiyadeed inta lagu jiro shaqada, si joogto ah u maydhaan gacmahooda ugana jeermiyaan.
Jikada gudaheeda, waxaa la bixiyaa macluumaad muuqaal / qoraal ah oo ku saabsan qawaaniinta ay tahay in shaqaaluhu raacaan iyo dhaqamada nadaafadeed ee wanaagsan.
Alaabada adeegga (oo ay ku jiraan baararka, xirmooyinka cuntada fudud) waxaa lagu maydhaa makiinada weelka lagu dhaqdo aaladda oo dhan.
Nadiifinta iyo nadaafadda biyaha barkadda, barkadda iyo hareeraha xeebta ayaa la bixiyaa illaa inta ugu badan,
Heerka koloriin waxaa lagu hayaa inta u dhexeysa 1-3 ppm barkadaha dibedda iyo 1-1,5 ppm barkadaha gudaha. Diiwaangelinta raadraaca ee cabbiraadaha xilliyeed ayaa la hayaa.
Hoteelada Erciyes Ski Resort
Ma jiro hudheel ka jira Uludag
Ogeysiiska Iibsiga: 3 shay oo lagu sameeyo kontroll-ka heerka laga kontoroolo
Ogeysiiska Qandaraaska: Mashiinka Mashiinka Qalabka Alaarmiga ee Muusikada Kumbuyuutarka ah
Adana metro waa nidaam tareen oo si buuxda loo ilaaliyo
Ogeysiiska qandaraaska: Warshadaha Quwada Koomaha ee otomaatiga ah iyo Warshada Dhaqista Wagon…
Faahfaahinta buuxda ee Mashruuca Village Village Logistics
Goobta New Kent Meydanı - Faahfaahinta mashruuca Terminal Tramway
Faahfaahinta Mashruuca Canal Istanbul
3. Faahfaahinta koowaad ee mashruuca maddaarka ayaa lagu dhawaaqay
Warar gaar ah: Bursa T1 1.Stage Tram (Magaaladda - Sawiraynta) Tafaasiisha
Faahfaahinta mashruuca Marmaray laga soo xigtay Wasiirka Dekedaha